China TLS Wall Mounted Type Relay Automatic Voltage Stabilizer (LED Meter) orinasa sy mpamatsy | Tailei
TLS wall mount series AC mandeha ho azy stabilizer stabilizer, izay no lohalaharana voafantina ny chip amerikana ataon'ny orinasanay ho an'ny circuit board. CONTROL RELAY na SERVO MOTOR CONTROL,satria ity misy habaka anatiny lehibe.
Ny fiovan'ny herinaratra ao amin'ny tamba-jotra elektrika ambonin'ireo fenitra azo ekena dia miteraka voka-dratsy amin'ny fitaovana elektronika sy elektrika.
Ity andiam-panamafisam-peo ity dia novolavolaina niaraka tamin'ny fenitra iraisam-pirenena ho an'ny fiarovana amin'ny fiakaran'ny herinaratra vonjimaika, manomboka amin'ny trano ao an-tanàna ary mifarana amin'ny trano fonenana sy famokarana lehibe.
140-260v / 100-260v Na ampanjifaina
Fotoana fohy 6, fotoana maharitra 180
1. Ny tanjaky ny fidirana amin'ny tambajotra dia tsy maintsy mifanaraka amin'ny fangatahan'ny AVR, ho an'ny asa tsara indrindra.2. Ampifandraiso soa aman-tsara ny plugs rehetra.3. Alefaso foana aloha ny herinaratra AVR, miverina ny herinaratra fanodinana. (Ny tsy fanatanterahana izany dia mety hipoaka ny fiakaran'ny AVR)4. Raha te hanana vokatra tsara indrindra, dia aza mampiasa raha misy ny fihoaram-pefy.5. Aza ampiasaina amin'ny lamba fanakonana be loatra na mora mirehitra; aza mifandray amin'ny ranon-javatra.
6. Ny fifandraisana misy eo amin'ny fahaizan'ny fivoahana sy ny herinaratra fampidirana toy izao manaraka izao sy ny sary:
Previous: TLN Wall Mount Voltage Stabilizer
Manaraka: TSDL Wall mihantona servo AC voltage stabilizer
Wall Mounted mandeha ho azy Tselatra stabiliser
Fanamafisana ny herinaratra miorina amin'ny rindrina
SDR Series Regulator mandeha ho azy mandeha ho azy
© Copyright - 2010-2020: Voatahiry ny Zo rehetra. Tips - Vokatra asongadina - Sitemap - Toerana finday Voltage Stabilizer ho an'ny amplifier, 4kva Voltage Stabilizer, Fanamafisana ny dizitaly ho an'ny Ac, 2kva Voltage Stabilizer, Fanamafisam-peo ho an'ny trano rehetra, Voltage Stabilizer 5000va, Vokatra rehetra